शितलले बद्री पंगेनीलाई बुर्तिबाङमा ठहरै पारेको हो त ? यो गितले त यस्तै भन्छ ? (भिडियो सहित)
बुर्तिबाङ । लोक दोहरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा बरिष्ठ लोक गायक बद्री पंगेनीले ढोपाटन महोत्सवमा माओवादी जनयुद्धका मात्रै बखान गरेनन उनले कामको खोजीमा बिदेश भौतारिएका युवा युवतीलाई नेपाल र्फकन समेत आग्रह गरे ।
तोकिएको सयम भन्दा अलि ढिला पुगेका बरिष्ठ लोकगायक पंगेनीसंग बुर्तिवाडकी चेली तथा सञ्चारकर्मी शितल शर्माले जमेर नाचे । कार्यक्रम चलाउदै चलाउदै नाच्न पुगेकी गायिका तथा कार्यक्रम प्रस्तोता शर्माले कान्छी कान्छी रे बोलको गितमा गायक बद्री पङगेनी लाई बुर्तिबाङ मा शितल ले कुहिनो ले हाने पछी बद्री ठहरै भए ।
महोत्सवको तेस्रो दिन अरु दिन भन्दा धेरै दर्शक जम्मा भएको मौका पारेर गायक बद्रीले भने मलाई बाग्लुडवासीले माया गर्छन । मेरो पनि माया छ । यति के भनेका मात्रै थियो दर्शक सबै नाच्न थाले । (विकासटाइम्स) को सहयोगमा !
हेनुहोला यो भिडियो